गर्भिणी हरिणीको धैर्य - Laltin Media
Home»मोटिभेसन»गर्भिणी हरिणीको धैर्य
By लाल्टिन डट कम May 23, 2022 Updated: May 23, 2022 No Comments1 Min Read
एक समयको कुरा हो । जंगलमा एउटी गर्भवती हरिणी घुमिरहेकी थिई । उसको बच्चा जन्माउने दिन आईसकेको थियो । उसले नदि किनारमा एउटा घाँसे मैदान भेटाई जहाँ उसलाई बच्चा जन्माउन सहज हुन्थ्यो । ऊ त्यहाँ रुखमुनि गएर बसी । अचानक त्यहाँ ठूलो पानी पर्यो । एउटा शिकारी पनि ओत लाग्ने निहुँमा त्यहीँ आईपुग्यो । नजिकै एउटा भोको सिंह पनि प्रकट भयो ।
अब के गर्ने ? हरिणी सोँचमग्न भई ! ऊ त्यहाँबाट भाग्न पनि सक्दैनथी । उसले जे होला होला भनेर बच्चा जन्माउन थाली । निर्दयी शिकारीले आफ्नो बन्दुक निकालेर हरिणीलाई ताक्न थाल्यो । त्यसको अर्कोपट्टी भोको सिंह गर्जिरहेको थियो । शिकारीले बन्दुक चलाउनै लाग्दाखेरी आकाश गर्जिएर बिजुली चम्कियो र शिकारीको आँखा तिर्मिरायो । उसले हानेको गोली सिंहलाई लाग्यो ।
घाइते सिंहले हरिणी छोडेर शिकारीको शिकार गर्न दौडियो । त्यहाँ परेको पानी पनि रोकिन थाल्यो । शिकारी र सिंह आँखाबाट ओझेल भईसकेका थिए । हरिणीले लामो सास फेरी । उसको बच्चा पनि सकुशल जन्मियो र आमाको वरिपरि उफ्रिन थाल्यो । एकछिन पछि, हरिणी र बच्चा सुरक्षित गन्तव्यतिर लागे ।
नैतिक पाठ: जीवनमा समस्याहरुले घेर्दा आत्तिनु भन्दा आफुँले जे गर्न सकिन्छ त्यो गर्नुपर्छ । धैर्यताको साथमा दु:खको समय काट्न सके, चमत्कार भई सुखका दिन पनि आउन सक्छन् ।